Full&Free ဆော့ဝဲလ်: August 2011
12:31 AM | Posted by SpaceX | Edit Post
ဟား ဟား ဒါလေးများ ငါတို့ သိတာ ကြာပေါ့ လုပ်ထားပြီးသား လို့တော့ အထင်တော် မမှားကြပါနဲ့အုံးဗျာ အရင်ဆုံး ငါတို့ သိထားတာ ထည့်ထားတာနဲ့ တူသလားလို့ အရင် ဖတ်ကြည့် စမ်းကြည့်ပါအုံး တစ်ကယ်လို့ သိပြီးသား ထည့်ပြီးသား ဆိုလဲ ဆောရီးပါ မသိသေးသူ တွေ အတွက်ပေါ့...
လုပ်ထားကြပါတယ် ဘလော့ အတော်များများ စာတွေကို Select လေး လုပ်ပြီး ကုးဖို့ အတွက် Right Click နှိပ်လိုက်မှ ကွန်ပြူတာက အလန့်တကြား ထအော်ပြီး ဘရောက်ဇာမှာ Popup ဝင်းဒိုးလေး ပေါ်လာပြီး Right Click လုပ်ခြင်း ခွင့်မပြု ဘာညာ နဲ့ အမိန့်ကြော်ညာတွေ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာတာ.....
အဲလိုကြီး လုပ်မယ့် အစား ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး အစကတဲက စာတွေကို Selected လုပ်လို့ မရအောင် လုပ်ထားကြရရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ...
ဟောဒီမှာ Demo လင့်လေးမှာ သွားစမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဲဒီက ပိုစ့်က စာတွေ Right Click နှိပ်ဖို့ အဆင့်ထိ မပြောနဲ့ စာတွေကိုတောင် Select လုပ်လို့ ရရဲ့လား ဆိုတာ...
ဒီတော့ ကူးချင်တဲ့ သူကပဲ ဟင် ငါတို့ ကွန်မကောင်းလို့လား မသိဘူး ၊ ငါတို့ ကွန်ပြူတာ ကြောင်နေလို့လား မသိဘူး ၊ ငါတို့ ဘရောက်ဇာ ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး ဆိုတဲ့ ဇဝေ ဇဝါ များစွာနဲ့ ကိုယ့်ကို အမြင်မကပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ ...နို့မို့ သတိပေးစာ ပြူးတူးပြဲတဲ အသံတွေကလဲ မြည်သေး ဆိုတဲ့ အချိန်ကျရင် တော်တော် အဝှာကျယ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ပါလားလို့ မေတ္တာ ပို့ခံရအုံးမယ် မဟုတ်လား...
ကဲ လုပ်ချင်တယ်ဆို အောက်က ကုဒ်လေးတွေကို ကူးလိုက်ဗျာ...
အပေါ်က ကုဒ်လေးတွေ ကူးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့(ကျွန်တော်ကတော့ ကုဒ်တွေ ကူးစေချင်လွန်းတဲ့ အတွက် ဒီနည်းကို သုံးမထားပါဘူး :P) ....
၁/blogger dashboard ကိုသွားလိုက်ပါ
၂/ပြီးရင် Desing --&-- Page Elements. ကို ဆက်သွားပါ...
၃/နောက်တော့ sidebar က 'AddaGadget' ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ
အဲဒီနေရာမှာ တတ်နိုင်ရင် အဲဒီ Gadget ကို အပေါ်ဆုံးမှာ ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ.. အားလုံးပြီးရင် ကိုယ့်ဆိုဒ်ထဲ သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး စာတွေကို Select လုပ်လို့ ရသေးလားဆိုတာကို...
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ အဆင်မပြေခဲ့သော် အောက်က ကွန်မန့်ထဲ မေးထားခဲ့ နိုင်ပါတယ်..။
PS: ဤ ဘလော့တွင် ဖော်ပြထားသော ဆော့ဖ်ဝဲလ် များ ဘလော့ဂ်နှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများ ကို အခြားအခြားသော ဘလော့ဂ်များ တွင်လဲ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်တွင် တင်ထားသမျှသည် ကျွန်တော် လိုချင်သောအခါ အလွယ်တကူ ရရှိရန် နှင့် မရှိသေးသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်...။
5:10 AM | Posted by SpaceX | Edit Post
အား jupitar ကိုရင်မောင် ရေးသားပါသည် http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင် http://www.mediafire.com/?noziemyl5yj = GTALK နှင့်ပက်သက်သမျှ http://www.mediafire.com/?050ltj4kgkd = လွယ်ကူစွာဂျီမေးနှင့်ဂျီတော့အသုံးပြုနည်း http://www.mediafire.com/?yyyzjylj2gy = ဂူးဂဲလျို့ဝှက်ချက်များ http://www.mediafire.com/?tzdqjdmemdj = ၀က်ဒီဇိုင်းလက်တွေ့သင်ခန်းစာများ http://www.mediafire.com/?xagz1meq9yn = မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် http://www.mediafire.com/?dgxzdjwdrmd = ၀က်ပိတ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း http://www.mediafire.com/?w3cdqdzwmmx = HTML မိတ်ဆက် http://www.mediafire.com/?zjcjv2dnrso = ဘလော့ဂါနှင့်ဆိုက်ဘာအတိုက်အခံသမားများ လက်စွဲ http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = PHOTOSHOP NOTES(2) အကြောင်း http://www.mediafire.com/?p07vsb70gmrk9q5 = ADOBE PHOTOSHOP CS (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?52q0ew2umzg = TIPS AND TRICKS OF PS CS4 (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?wlzgykyjmjw = MAYA AND PHOTOSHOP (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?0yxwwztxf1k = ADOBE PHOTOSHOP 7.0 http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = ဖိုတိုရှော့မှတ်စုများ http://www.mediafire.com/?jd0hmmzdqdj = ပုံရိပ်များရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝ http://www.mediafire.com/?ijjgjjvz3t3 = ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသင်ခန်းစာ http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = PC MECHANIC http://www.mediafire.com/?ytoevqnnqwy = ပီစီတစ်လုံးတပ်ဆင်ရန်ရွေးခြယ်ခြင်း http://www.mediafire.com/?qatznyhmycx = ကွန်ပြူတာသိပံ္ပ္ပမိတ်ဆက် http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ ကွန်ပျူတာပြင်ပါ http://www.mediafire.com/?qnji1uh2qnj = ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ်သိစရာ http://www.mediafire.com/?zxjnayfxynw = ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း http://www.mediafire.com/?ksqsyeashheupib = အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်း အခြေခံနည်းစနစ် http://www.mediafire.com/?qndaxgdede0 =ကွန်ပျူတာအမေးအဖြေ http://www.mediafire.com/?wswd9ayna1t = ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် http://www.mediafire.com/?z0jmgzdyggq = ကွန်ပျူတာအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် http://www.mediafire.com/?dzsiyudsbh3 = သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် http://www.mediafire.com/?twnftxnvxtr = ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ http://www.mediafire.com/?njiycdz4htw = တီထွင်မှုမှော်ဝိဇ္ဇာကြီးအယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင် http://www.mediafire.com/?ymzb9ubyzmm = ၂၁ရာစုဂူးဂဲနှင့်ပြောင်းလဲသွားသောအင်တာနက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုလေ့လာခြင်း http://www.mediafire.com/?cigqtwgskzx = တီထွင်မှုများ http://www.mediafire.com/?wymogtik4cu = သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ http://www.mediafire.com/?kv1qe99nr8id3gb = TWENTY THINGS I LEARNED ABOUT BROWSER AND INTERNET (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?fflsbgmr77i9rbo = WEB DESIGN HTML AND CSS http://www.mediafire.com/?jhh7u5ksx3hum5m = AUTOCAD 2005 http://www.mediafire.com/?uv7gv93w69ykx13 = AUTOCAD 2002 http://www.mediafire.com/?udt25jcc8o5f3d2 = MICROSOFT WORD 2002 http://www.mediafire.com/?yzyummzde2m = MICROSOFT EXCEL 2002 http://www.mediafire.com/?yidm0udqzuz = WINDOW INSTALLATION (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?gzzntmzzcxm = INTRODUCING MAYA 2008 (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?zzydzvnm0dd = MS FRONT PAGE 2002 http://www.mediafire.com/?mj2nzlrzw3v = BASIC WORD PROCESSING (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?niyytyqwwtj = COMPUTER DICTIONARY (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?quhmiu0gomy = LEARNING GUIDE FOR http://www.mediafire.com/?gzt2tycucb3 = VIDEO CONFERENCING SERVER (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?d1dkxscgcsz = SMALL OFFICE OR HOME OFFICE http://www.mediafire.com/?uu0mj6i2dyd6nkf = REMOTE DESKTOP ENVIRONMENT http://www.mediafire.com/?wgjxwdznend = PROTECTING FROM http://www.mediafire.com/?cclacsgsywd = NETWORK ADDRESS TRANSLATION http://www.mediafire.com/?wan1g45myhw = CMS AND DYNAMIC PORTAL ENGINE http://www.mediafire.com/?wjzrnumnmtg = INTERNET CONNECTION SHARING http://www.mediafire.com/?nyf3dwiezmz = E-MAIL SERVER http://www.mediafire.com/?jmzmewt9cm1 = DOMAIN NAME SYSTEM SERVER http://www.mediafire.com/?gzdzlffuzqz = LEARNING CSS-2http://www.mediafire.com/?eoe2jwhniyd = MS POWER POINT 2002 http://www.mediafire.com/?znjmdeh3zkd = LEARNING CSS http://www.mediafire.com/?myzzm4tjnh4 = HARDWARE AND NETWORK http://www.mediafire.com/?44ykzzz1m2m = VISUAL BASIC 6.0 http://www.mediafire.com/?jnmgjymmz1u = VB 6.0 TUTORIALS (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?l07778b87waz8os = MICROSOFT ACCESS 2002 http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad = LEARNING HARDWARE IN5MIN http://www.mediafire.com/?xo9txgs54c2cytf = BUILDING WEBSITES WITH JOOMLA http://www.mediafire.com/?bb71n4lq41v045t = JOOMLA QUICK START (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?mfmegtmadyx = FrontPage2002 (မြန်မာ)
Windows Welcome Screen ကို ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပြောင်းပေးမယ့် Software..။
3:45 AM | Posted by SpaceX | Edit Post
Software နာမည်က Logonstudio ပါ။ သူက Windows စတက်တက်ချင်း Desktop ပေါ်သို့ရောက်မလာမီ
ကြားထဲက Welcome Screen ကို ပုံလှလှလေးတွေပြောင်းပေးပါလိမ့်
Stardock LogonStudio 1.7(၇.၅၃အမ်ဘီ)
လှချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ယူနိုင်ပါတယ်
Desktop ပေါ်တွင် မြန်မာ ပြက္ခဒိန်တင်ရန် Software
12:12 AM | Posted by SpaceX | Edit Post
Myanmar Calendar for 2011
Written by Thurein
Product Name: Myanmar Calendar for 2011
Product Type: Windows7Gadget
Author: Zaw Thurein Tun
Credit: Ko Soe Min & Ko Wunna Ko
Proudct License: Freeware
ကွန်ပျူတာ၏ Desktop ပေါ်တွင် လက်ရှိမြန်မာသက္ကရာဇ်နှင့် မြန်မာရက်စွဲကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်သည်။ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ရောက်ပါကလည်း နေ့ထုးနေ့မြတ်၏ အမည်ပါ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
(၁) Windows7Operating System
(၂) Zawgyi Font
အပေါ်က Download button ကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ ။ Zip ဖိုင်တစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Zip ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Myanmar Calenar.Gadget ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Folder ကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Windows Sidebar\_Gadgets ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတဲ့အခါ Desktop ပေါ် Right Click နှိပ်ပြီး Gadgets ကို ရွေးပါ။ ပြီးနောက် Myanmar Calendar ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်ဟာသင့် Desktop ပေါ် ရောက်လာပါလိမ့်မ ယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မြန်မာလို ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲလို့ မေးလိုက်ရင် ဖြေနိုင်တဲ့သူ တော်တော်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မသိလည်း ဘာဖြစ်လဲလို့ပြန်မေးရင်တော့ ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူးပေါ့လေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ရောက်ရင် ဘုရားသွားဦးမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်ကြံစည်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာ မသိတော့ပါဘူး။ ပြက္ခဒိန်ကိုလည်း မကြည့်ဖြစ်ဘဲ လူက ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာကိုး။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့မှ ကွန်ပျူတာနဲ့ မြန်မာပြက္ခဒိန်ကြည့်လို့ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး အတွေးလေးက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ၀င်ရောက်လာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်၁၉နေ့မှာပါ။ ဇူလိုင်၁၉နေ့ရောက်ရင် ဗိုလ်ချုပ်သီချင်းတွေကို အိမ်နီးချင်းတွေကြားအောင်ပါ ဖွင့်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ဇူလိုင်(၁၉)ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် မသိတော့ပါဘူး။ လွန်သွားမှ သိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့မှ ကွန်ပျူတာနဲ့ မြန်မာ့နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကို ကြည့်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး အတွေးလေးက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ၀င်ရောက်လာပါတယ်။
အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာပဲ လုပ်ရတော့ ကြားထဲမှာ တစ်လလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြက္ခဒိန်အကြောင်း နားလည်အောင် စာအုပ်တွေရှာဖတ်ရပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး မဟာသုတဒီပနီကျမ်းထဲမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန် ဘယ်လို တွက်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီး နားမလည်ပါဘူး။ နောက် နီးစပ်ရာလူကြီးတွေကို မေးကြည့်တော့ မြန်မာပြက္ခဒိန်ဟာ နှစ်တွေအများကြီး ကြိုတင်တွက်မရဘူးဆိုတာပါ သိလိုက်ရပါတယ်။ အခု ရောက်နေတဲ့ ၁၃၇၂ နှစ်ကိုမှ နောက်ထပ် ၁၃၈၀ အတွက်ဆိုပြီး ကြိုတွက်လို့ မရဘူးဆိုတာပါ သိလိုက်ရပါတယ်။
တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
Labels: software |0comments
10:17 PM | Posted by SpaceX | Edit Post
အသစ်ပြုပြင်ဆဲ ကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ???@@@@@???
9:50 AM | Posted by SpaceX | Edit Post
Establishatwo-way firewall with justafew clicks, to continuously monitor your Internet connections and prevent unauthorized access?even overaWi-Fi network.
Match the interface to your level of comfort by selecting between Basic, Intermediate, or Expert settings?and quickly create shortcuts to frequently used controls.
Requirements: Win XP, Vista, Win7, 1 GB free space on HD,CPU:800MHz processor,RAM:512MB(XP), 1GB(Vista and Win7)
What's new in this version: Skin Fixes, Shorter Installation Time, Lower Scan Times, Scan Summary Displays Correctly
trial ဗားရှင်း exe ဖိုင်လေးကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ၃၀၄.၁၅ အမ်ဘီ ရှိပါတယ် ဖိုင်ဆိုက်ကြီးလို့
စိတ်မပျက်ပါနဲ့ .... :P resume ပေးထားပါတယ်.....ဖူးဗားရှင်းလေး သုံးလို့ ရအောင် ကရက်
လေးပါရှာပီး တင်ပေးထားပါတယ် 2045 ခုနှစ်အထိတဲ့ဗျာ....
ကျနော်တော့ မစမ်းရတေးပါ :D.... စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Bitdefender Total Security 2011 exe
ကရက် ကို ဒီနေရာလေးကို ကလစ်ပီး ဒေါင်းလိုက်ပါ
ဖိုင် size ၂ပိုင်းခွဲပီး မီဒီယာဖိုင်းယား တင်ထား တာကိုလည်း ဒီနေရာလေးကဒေါင်း နိုင်ပါတယ်
Labels: antivirvs |0comments
No Copy No Select မိမိပိုစ့်တွေ ကာကွယ်ချင်သူများ အ...
♥ ♥ ♥ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးဝင်သည့် စာအုပ...
Windows Welcome Screen ကို ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပြောင...
ဒီဇိုင်း ==> မောင်အေးလွင်
Designed by ayelwin.